बेलायती सरकारबाट पाउने सहुलियत व्यवसायीले कसरी लिने ? - GurkhaMedia बेलायती सरकारबाट पाउने सहुलियत व्यवसायीले कसरी लिने ? - GurkhaMedia
बेलायती सरकारबाट पाउने सहुलियत व्यवसायीले कसरी लिने ?
यदि तपाईं सानो वा मध्यम व्यवसायी (एसएमइ) हुनुहुन्छ र तपाईंलाई बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुनसक्ने सहयोगका बारेमा थाहा छैन भने हामी तपाईंलाई केही जानकारी दिनेछौं । सरकारले तपाईंहरुका लागि केही सहयोगको प्याकेज ल्याएको छ र त्यसलाई तपाईंले अहिले नै प्राप्त गरी आफ्नो व्यवसायमा लगानी गर्न र व्यापार बढाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको व्यवसायको लागि अन्य के सहयोग उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जीओभी डट युकेमा गई बिज्नेस सपोर्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ । अथवा अरु योग्य व्यवसायीहरुबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ । यदि हामीसित जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हामी त्यस्तो जानकारी दिन तम्तयार छौँ । हामीलाई 07867308033 र ०१२५२ 656888 मा फोन वा shyam@paperworksolutions.co.uk मा इमेल गर्नसक्नुहुन्छ ।